प्रेममा परेपछि सृष्टिलाई फाइदा ! - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda
प्रेममा परेपछि सृष्टिलाई फाइदा !
फिल्मी फण्डा । रजतपटमा मिस नेपाल भएर प्रवेश गरेका नायिकाहरुको यात्रा उतिसाह्रो सफल भएको पाइँदैन । उनीहरुमाथि सुन्दर अभिनयको खडेरी रहेको आरोप लाग्ने गर्दछ । एकाध फिल्म सफल भए पनि मिस नेपाल नायिकाहरुको अधिकांस फिल्महरुले दर्शकमाझ छाप छाड्न सकेको पाँइदैन । मिस नेपालको ताज जितेर रजतपटमा प्रवेश गरेकी नायिका हुन् सृष्टि श्रेष्ठ ।
उनको डेब्यु फिल्म गाँजलु हिट पनि भयो । सोही फिल्ममार्फत नै उनी लाइमलाइटमा आइन् । तर, त्यसयता सृष्टिको करिअरमा सफल फिल्मको प्रवेश हुन सकेको छैन । उनले रोमियो एन्ड मुना खेलिन्, फ्लप भयो । बाँध मायालेबाट पनि दर्शकलाई मायाँले बाँध्न सकिनन् । बरु यहीबीच सृष्टि सौगात मल्लको प्रेममा रमाउन थालिन् । उनीहरु सकसका साथ क्यामेराको लेन्सबाट जोगिँदै सम्बन्ध लुकाउन लागेनन् । खुलेरै प्रस्तुत भए ।
सृष्टिको फिल्म प्रदर्शनमा नआएको पनि बर्ष दिन नै हुन लाग्यो । सौगात र सृष्टिले स्क्रिन सेयर गरे फिल्म ‘मासु भात’ मा । सो फिल्म हाल पोष्ट प्रोडक्शनमा रहेको छ । भर्खरै उनीहरुले अर्को फिलम ‘पोइ र्पयो काले’मा सँगै काम गरेका छन् । त्यस्तै सौगात र सृष्टिले चपली हाइटको नयाँ शृंखला हात पारेको खबर छ । ‘चपली हाइट’को तेस्रो भागका लागि निर्माताले यी दुईलाई फाइनल गरेको खबर बाहिरिएको हो । उनीहरुले एक पछि अर्को फिल्ममा काम गर्ने खबर बाहिरिएको छ । प्रेममा परेपछि भएन त सृष्टिलाई फाइदा ! सृष्टिका आगामी फिल्महरुले कत्तिको सफलता पाउँछन्, त्यो भने प्रतिक्षा गरौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : अवार्ड समारोहको होइन सरकारी खर्चको विरोध
फिल्मी फण्डा । इन्टरनेसनल इण्डिया फिल्म अवार्ड(आइफा) को २० औँ संस्करण सरकारी निकायको अग्रसरतामा खर्च समेत व्यहोर्ने गरि काठमाडौमा आयोजना हुने विषयले चर्चा पाइरहेको छ । अवार्ड नेपालमा हुने फाईदा र बेफाईदाका बारेमा बहस भइरहेको छ । अवार्ड कार्यक्रमको विरोध भएको होइन, अवार्डलाई लिएर गर्ने खर्चमा अहिले विरोध भइरहेको छ । पराईलाई काखा र आफ्नालाई पाखा गरेको आवाज पनि उठिरहेको छ । स्वदेशी फिल्मको श्रवृद्धि र अवार्डलाई वेवास्ता गर्ने तर विदेशी अवार्डको लागि खर्चको प्रवन्ध गर्ने कार्यले फिल्म क्षेत्रका सरोकार व्यक्तिहरुले विरोध गरिरेहका छन् । त्यस्तै अवार्ड कार्यक्रमको समर्थन गर्नेहरुले नेपाल शुटिङ डेस्टिनेशन नेपाल योजनामा बलिउडलाई अकर्षित गर्ने नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० लाई सहयोग पुर्याउने बताइरहेका छन् ।
अवार्ड आयोजनाको लागि बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले पर्यटन मन्त्री वा राज्यमन्त्री संयोजक रहने गरी एक उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । अवार्डको सहआयोजक काठमाडौं महानगरपालिका हुने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डले नेतृत्व रहने बताइएको छ । अवार्ड आयोजनासहित कार्यक्रमका लागि सरकारले आईफालाई ४० लाख डलर (४४ करोड २५ लाख रुपैयाँ) सहित हवाई, खानपान तथा आवासको छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने छ ।
अवार्ड समारोहको लागत झण्डै १ अर्ब बराबारको हुने अनुमान गरिएको छ । अवार्ड सरकारी निकायको संग्लनतामा नभई निजि क्षेत्रको सक्रियतामा हुनपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसै विषयमा पूर्व उप–प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले आइफा नेपालमा हुने कुराको स्वागत गर्दै यसलाई निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन् – ‘‘आईफा अवार्ड’’ नामको फिल्मी समारोह नेपालमा आयोजना होस् । त्यसले नेपालको प्रचार नै हुनेछ । अन्यत्र जस्तै सो समारोह निजी क्षेत्रको लगानी र सक्रियतामा हुनुपर्छ । जनताले तिरेको करबाट ५०सौं करोड सरकारी रकम खर्च गर्ने र उडाउने कार्य सर्वथा उपयुक्त हुंदैन । प्रम @kpsharmaoli को ध्यान आकर्षित गर्दछु’ । उनले सरकारी पैसा उडाउने कार्य उपयुक्त नरहेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । विदेशी अवार्डको लागि खर्च गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेका चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले अवार्ड हुनु स्वागत योग्य भएपनि सरकारी ढुकुटीको प्रयोग भने मान्य नहुने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्,–‘नेपाली फिल्म अवार्ड विदेशमा आयोजना गर्दा सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने पर्यटन वोर्ड भारतिय फिल्म अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्न तम्सेको देख्दा अचम्म लागेको छ । निजी क्षेत्रले गर्दा केही आपत्ती छैन तर सरकारी पैसा किन लगाउने ?’ उनले निजी क्षेत्र जोडिएर गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् ।
निर्देशक प्रदीप भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसकार्यको विरोध गरेका छन् । विदेशी अवार्डमा देखाएको जोश आफ्नै देशको फिल्म क्षेत्रको विकासका लागि देखाउन आग्रह गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्,– ‘आइफा नेपालमा हुनु राम्रो कुरा हो …तर आफ्नै देशको राष्ट्रिय अवार्ड बितरण गर्न तीन बर्ष लगाउने …..एउटा फिल्म सिटि बनाउन आलटाल गर्ने अनि अर्काको अवार्ड गर्न चै किन तातो लाग्या ? मैले त बुझिन तपाईंले बुझ्याु भए भन्दिनु है ।’
यो पनि पढ्नुहोस् : आईफा अवार्डबाट नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई फाईदा के ?
फिल्मी फण्डा । प्रियंका कार्की कुनै समय रजतपटकी एक नम्बरकी नायिका मानिन्थ्यो । । उनको माग उच्च थियो । उनी अभिनित फिल्म हिट लिस्टमा अट्ने गर्थे । नायिका रेखा थापापछि नायिकाको स्टारडमको खालीठाउँ प्रियंकाले पूरा गर्ने धेरैको विश्वास थियो । तर, उनले आफ्नो साख जोगाइराख्न सकिनन् ।
गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मक रुपमै हावी देखिन्छिन् प्रियंका । फिल्ममा अतिथि कलाकार बनेर पर्दामा झुल्किरहन्छिन् उनी । यसले उनको स्टारडम निकै कमजोर बनेको छ । फिल्म दाल भात तरकारीमा उनी आइटम गर्लको रुपमा देखिइन् । त्यस्तै अर्को फिल्म सुश्री सम्पत्तीमा पनि उनको आइटम गीतमा डान्स देख्न सकिन्छ ।
अहिले उनको फिल्मलाई लिएर दर्शकमा कुनै चासो देखिन्न । उनी अभिनित फिल्म प्रेम दिवस जेठ ३१ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको थियो । तर, फिल्मले आसलाग्दो कारोबार गर्न सकेन । हालै प्रियंका हेल्लो जिन्दगी फिल्ममा स्वेता खड्काले काम गर्न नसकेपछि भित्रिएकी छिन् ।
अब साँच्चै प्रियंकाको करियर ओरालो लाग्न थालेको हो ? ठूला ब्यानरका फिल्मको प्राथमिकतामा प्रियंका पर्न छाडिन् । धेरैजसो फिल्ममा अतिथिको भूमिका देखिदाँ प्रियंका यसमै सिमित हुने त होइनन् ? दर्शकले नै रुचाउन छाडेपछि फिल्मी यात्रा ओरालो लाग्ला है प्रियंका जी !
यो पनि पढ्नुहोस् : करिष्मा मानन्धरको अबको शैक्षिक बाटो
फिल्मी फण्डा । नायिका करिष्मा मानन्धरले एसईई परीक्षामा जीपीए ३ प्राप्त गर्दै बी प्लस ग्रेड ल्याएकी छिन् । उनले नतिजाबाट आफू निकै खुशी भएको बताइन् । उनलाई सामाजिक सञ्जाल र फोन मार्फत साथिभाई आफन्त तथा फ्यानहरुले बधाई दिइरहेका छन् । करिष्मालाई धेरै फोनहरु आए उनले फेसबुकमा स्टाटस लेखेकि छिन् ‘आज पहिलोपटक महसुस गरे फोन घरीघरी बज्दा कस्तो हुन्छ !!’
उनले आगामी दिनमा पढाइलाई निरन्तरता दिने बताइन् । अब उनले व्यवस्थापन संकाय पढ्ने जानकारी दिएकी छिन् । उनले भनिन्,– ‘मलाइ बि आउछ जस्तो लाग्या थियो तर बि प्लस आयो त्यसैले निकै खुसि छु’ करिश्मा भन्छिन् ‘पहिला त मानविकी संकाय पढ्ने सोच बनाएकी थिए तर अब भने व्यवस्थापन संकाय नै पढ्छु ।’
एसईई पछि उनलाई निजि विद्यालयबाट छात्रवृति सहित प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, उनी सरकारी विद्यालयमा अध्यन गर्ने मनस्थितिमा छिन् । उनि गोदावरी स्थित दुइ सरकारी उच्च मावि मध्य एकमा पढ्ने बताउछिन् । केही वर्षयता फिल्म अभिनयबाट टाढा रहेकी करिश्माले फिल्म नगरीमा म्यानेजमेन्टको कमि रहेको बताइन् ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले करिष्मा पार्टी बाट पढ्नका लागि दुई वर्षका लागि छुट्टीमा रहेको बताएका थिए । तर, करिष्माले भने पार्टी छाडिसकेको बताइन् । उनले अहिले कुनै पनि पार्टीमा आफु संलग्न नरहेको तर, आउने दिनमा कुनै सक्रिय पार्टीमा आवद्ध हुने बताइन् । उनले मैतिदेवीको त्रिवेणी पब्लिक स्कूलमा एसईई परिक्षा दिएकी हुन् । उनको परीक्षा केन्द्र विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय डिल्लीबजार थियो । यो वर्ष ४ लाख ५० हजार २७५ परिक्षार्थी एसइइ मा सहभागी भएका थिए ।
फिल्मी फण्डा । सरकारले इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आईफा अवार्ड–२०१९) काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भएको छ । बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रत्ती गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन । उनका अनुसार महानगरपालिका सह–आयोजक रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौंमा आईफा अवार्ड–२०१९ आयोजना गर्न सरकार तयार भएको हो । उक्त अवार्ड समारोह नेपाली सेनाको मुख्यालयमा हुने बताइएको छ ।
यस अघि आईफा अवार्ड–२०१९ नेपालमा आयोजना गर्ने वातावरण बनाउन भन्दै सरकारले ८ असारमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । सरकारले कार्यक्रमका लागि पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको नेतृत्वमा समिति पनि बनाएको छ । यो कमिटिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर, पर्यटन, गृह, अर्थ, सञ्चार, परराष्ट्र, भौतिक मन्त्रालयका सचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष, भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक रहने छन् ।
यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष, उद्योग परिसंघको अध्यक्ष, चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ र होटल संघका नेपालका अध्यक्ष कमिटीमा रहने छन् । सरकारले पर्यटन वर्ष–२०२० लक्षित गरी यो अवार्ड समारोह गर्न लागेको बताईएको छ । विशेष संयोजन पर्यटन बोर्डका सिईओ दिपक राज जोशीको रहने जनाईएको छ । अवार्डको कूल लागत १ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । ५० करोड बराबर सरकारी निकायबाट खर्च गरिने सरकारले जनाएको छ ।
अवार्ड समारोहमा ८० देखि १०० जना बलिउड कलाकार सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । उनीहरुका सहयोगी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत सबै गर्दा ६–७ सयको हाराहारीमा विदेशी पाहुना सहभागी हुने सरकारको अनुमान छ । बलिउड कलाकार तथा प्राविधिकहरुको हवाई टिकट, होटल बसाई, सुरक्षा व्यवस्थापन, कार्यक्रमस्थल निर्माण तथा व्यवस्थापनमा ठूलो पैसा लाग्ने छ । उनीहरुको आवतजावत, सुरक्षा तथा बासस्थानका लागि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।
बलिउडको प्रस्तुती, बलिउडकै अवार्ड
आईफा अवार्डमा कुनै पनि नेपाली कला, संस्कति र मौलीक भेषभुषा प्रदर्शन हुने कार्यक्रम समावेश हुने छैन । आईफाको अन्तर्राष्ट्रिय संस्करणहरुले त्यो प्रष्ट देखाउँछ । यसबाट फिल्म क्षेत्रलाई फाईदा त छैन नै, पर्यटन प्रवद्र्धन हुनेमा पनि शंका रहेको छ । भारतको कला संस्कृतिलाई नेपालमा प्रस्तुत गर्दैमा नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने कुरालाई विश्वास गर्न कठिन छ । यहि कार्यक्रमले पर्यटन बर्ष–२०२० लाई प्रत्यक्ष रुपमा टेवा पुग्छ भन्नु मुर्खता मात्र हो ।
बलिउडको कार्यक्रम गरेर १०० जना भारतीय कलाकार काठमाडौंको सुरक्षा क्याम्प भित्र आउँदैमा पर्यटन प्रवद्र्धन हुने संभावना निकै न्युन छ । बरु सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट, विभिन्न देशमा दुताबासहरुमार्फत नेपालको पर्यटन वारे जानकारी तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमहरु गर्न सके पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।
नेपाली अवार्ड र फिल्म उत्सबलाई बेवास्ता
मौलीक नेपाली फिल्म अवार्ड तथा फिल्म फेष्टिभललाई भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आईरहेका छन् । त्यसमा पनि पर्यटन बोर्ड अग्रस्थानमा पर्ने गरेको छ । पयर्टन प्रवद्र्धनको जिम्मा लिएको पर्यटन बोर्ड नेपाली फिल्म अवार्ड र फिल्म फेष्टिभलमा मुखदर्शक बन्दै आईरहेको छ । विभिन्न अवार्डमा सहयोग गर्ने वचनवद्ध पछि पनि पर्यटन बोर्डले यस्ता कार्यक्रमहरुलाई पछि आएर बेवास्ता गर्दै आईरहेका छन् ।
यस्तै चलचित्र विकास बोर्ड, महानगरपालिका र सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयले सहकार्यको रुपमा केही झिनो सहयोग मात्र गर्दै आईरहेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय नै लागेर फिल्म सम्बन्धि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु नेपालमा अहिलेसम्म आयोजना गरेको छैन । नेपाली कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा सहयोगको नीति लिन नसक्ने सरकारी निकाय तथा संघ संस्थाहरुले विदेशी अवार्डलाई प्रथामिकताका साथ कार्यक्रमको आयोजक नै बन तयार भएको यो पहिलो रेकर्ड हो ।
पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा यो कार्यक्रमलाई सरकारले निर्णय गरेपनि नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई भने यसबाट फाईदा हुने कुनै आधार देखिदैन । सरकारले नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र नेपाली फिल्मी बजारलाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले आयोजना हुने फिल्म अवार्ड तथा फेष्टिभलहरुलाई पाँच लाख भन्दा बढि रकम सहयोग दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । तसर्थ दिन दिनै नेपाली फिल्म अवार्ड र फिल्म फेष्टिभलहरु धरायसी बन्दै गईरहेको छ । यस्ता स्वदेशी कार्यक्रहरुलाई सरकारले नियमन गरेर आवश्यक सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : स्टारका वर्षको एउटा मात्र फिल्म ?
फिल्मी फण्डा । वर्ष २०७५ मा ९६ ओटा फिल्म प्रदर्शनमा आए । ती मध्ये अधिकंशले लागनीको ठूलो हिस्सा फिर्ता गर्न सकेनन् । फिल्महरु घाटामा गएपछि कम मात्रामा फिल्म निर्माण हुँदै छ । चल्तिका कलाकारहरु पनि अहिले फूर्सदिला देखिएका छन् । उनीहरु यसलाई ब्रेक भनिरहेका छन् । पुरानो शैली र प्रवृतिमा परिवर्तन ल्याउन कलाकार विश्राममा छन् । आसातित स्टार र उनीहरुको फिल्महरु ब्याक टू ब्याक असफल भइरहँदा वर्षमा एउटा फिल्म खेल्ने तर गुणस्तरिय फिल्म खेल्ने योजनामा कलाकारहरु रहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रकाश सपूत र शम्भु राई जसले सामाजिक सञ्जाल देखी संसदसम्म हल्लाए
फिल्मी फण्डा । सर्जक प्रकाश सपूतले ‘गलबन्दी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरे । गीत लोक लयको थियो । गीतलाई जनजिब्रोमा बस्न र हिट हुन समय लागेन । सपूतको गीत २०४८ सालमै रेकर्डिङ गरिएको गायक शम्भु राईको ‘आऊ नाचौं साथी हो…’ सँग लय मिलेको आरोप लाग्यो । सोही विषयलाई लिएर शम्भु राईले प्रतिलिपि रजिष्टार कार्यलयमा मुद्दा हाले । उजरी गर्नु अघि राई र सपत संगीत सम्बन्धि संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफलमा रहे ।
लामो समयदेखि यी दुई छलफलमा रहेपनि दुइको छलफल किनारा लाग्न भने लागेन । उजुरी हाले पछि राईले भनेका थिए,– ‘यो बौद्धिक सम्पत्तीको कुरा हो । अब, जे गर्छ कानुनले नै गर्छ ।’ उनले सपूत आफूबीच बुझाईम एकरुपता नआएको र सबै कुरा मुद्दा मात्र नभएको बताएका थिए । जसलाई उनले अस्तित्वको लडाईको रुपमा व्याख्या गरे । साथै राईले आफू र प्रकाश सपुतविच सिस्टममा मतवेद मात्र भएको तर व्यक्तिगत रुपमा कुनै इगो नभएको पनि स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।
उक्त विषय सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको थियो । कलाकारहरुले पनि यस विषयमा आफ्नो धारण सामाजिक सञ्जालमार्फत राखिरहेका राखेका थिए । उनीहरुले गीतको विवादमा कम विवादमा मिसिएको जातियता विरुद्ध बोलेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा केही प्रयोकर्ताले सपूत विरुद्ध गैर कानुनी रुपमा जातियता मिसाएर टिप्पणी गरेका थिए । जसलाई लिएर तीव्र आलोचना समेत भयो ।
विचार र बहस सामाजिक सञ्जालमा मात्र सिमित रहेन संसदसम्म पुग्यो । नेपाली कांग्रेसका सांसद नेता एवं पूर्व मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले संसदमा ‘गलबन्दी’ गीतको विवाद बारेमा आफ्नो धारण राखेका थिए । ‘मेरो लय नक्कल गरिएको भनेर मुद्दा हालेछन्’ विश्वकर्माले भने, ‘हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको लोकलय पुर्खाले गाएको गीतलाई पछिल्लो पुस्ताले सिक्दै पछिसम्म जीवित राख्ने हो ।’ उनले एक पुस्ताले एकपल्ट गाएको गीत एकपल्ट मात्र रेकर्ड हुन्छ भने लोक भाका नहुने बताएका थिए ।
प्रकाश सपूतको गीतको समर्थन उनले भने गाउँघर, रोदि, मेलापातमा जाँदा यो गीत स्वतः गाउने भाका नै लोक लय हुन्छ । उनले प्रकाश सपूतको गीत कुनै पनि भाकासँग मेल नखाने पनि दाबी गरेका थिए । शम्भू राईले सामान्य कलाकारले गरेको काममा चोरी गरेको भन्नु लज्जास्पद रहेको उनले बताएका थिए ।
राईका मतियारहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै प्रकाश सपूतलाई अति निच गाली गर्दै जातीय विभेदपूर्ण शब्द प्रयोग गरेको भन्दै मीनले निन्दा गरे । संविधान, सदभाव र कानूनको विरुद्ध हुने गरी दलित समुदायलाई अपमानित हुने गरी अपमान गरेको हुनाले साइबर कानून अन्तर्गत जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर सजाय ऐन २०६८ अन्तर्गत र संविधानको धारा २४ अन्तर्गत कारवाहीको माग गरे ।उनले आरोपीलाई कानूनी कारवाहीमा नल्याए सम्पूर्ण दलितहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
‘गलबन्दी’ को विवाद अन्ततः सहमतिमा टुंगिएको छ । प्रकाश सपूत र शम्भु राईले प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टारको कार्यालयमा बुधवार ४ बुँदे सहमति गर्दै चोरीको विवादलाई सहमतिमा टुंग्याएका छन् । प्रकाश सपूतको गीत ‘गलबन्दी’ को पछ्यौरी च्यातियो तिम्ले तानेर अंश र शम्भु राईको ‘देउसी भैलो’ मा समावेश आऊ नाचौँ साथी हो कम्मर कसेरको लय मिल्न गएको शम्भु राईले बताउँदै आएका थिए ।
संगीत क्षेत्रका प्रतिनिधिको रोहवरमा प्रकाश सपूत र शम्भु राईले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । लय मिल्न गएको देखिएकाले लोक दोहोरी ‘गलबन्दी’ बोलको गीतको संगीत सिर्जना शम्भु राईको नाम समावेश गर्दै सच्याउने र पुनः संगीत सिर्जनामा प्रकाश सपूतको नाम राख्ने गरी सहमति भएको छ । जस अनुसार गीतको गीतको संगीत सिर्जना शम्भु राई र पुनः संगीत सिर्जनामा प्रकाश सपूतको नाम राखिएको छ ।
यस्तै बुँदा नम्बर २ मा गीतमार्फत आउने आम्दानी सबै प्रकाश सपूतले नै पाउने र शम्भु राईले पनि आर्थिक अधिकार र प्रतिलिपी अधिकारका लागि दाबी गर्न नपाइने भनी सहमति भएको छ । योसँगै शम्भु राईले गीत चोरीको आरोप लगाउँदै सपूतविरुद्ध दिएको उजुरीसमेत फिर्ता लिएका छन् ।
समग्र संगीत क्षेत्रको जित
सर्जक शम्भु राईले पहिले देखि नै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सहमति प्रयास भएको बताएका छन् । उनले भने,– ‘हामी निरन्तर छलफलमा थियौँ र आपसमा सहमति गयौँ । यसले हार जित भन्दा पनि समग्र गीत संगीत क्षेत्रको जित भएको छ । भावि पुस्तालाई पनि यसले सौहार्दपूर्ण व्यवहार र वातावरणको लागि मार्गचित्र देखाएको छ ।’ लोक गीतको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
जतियता मिसाउनु गलत
सर्जक राईले गीतको विवादित विषयमा बहस चलिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा जातियताको कुरा गर्नु गलत भएको बताए । उनले भने,– ‘फेसबुकमा कसैले केही नचाहिदो कुरा लेख्दैमा त्यसलाई पछ्याउनु हुँदैन । जनताले लामो समय देखी परिवर्तनको लागि लडिरहेका र अब कानुनले समेत बर्जित गरेको कुराको अफवाहको पछाडी दोडन हुँदैन ।’
गीत चोरेको भनेर आएको समाचार प्रति उनले स्पष्ट भएर समाचार संप्रेषण गर्न आग्रह गरे । ‘गीत मिलेको होइन यो त लय मिलेको हो, त्यसैले सञ्चार माध्यममले पनि सही रुपमा समाचार संप्रेषण गर्नुपर्यो ।’ उनले बताए ।
सन्तोष पन्तको “हिजो आजका कुरा”को औपचारिक निर्माण घोषणा
फ्लप केकीको हिट फिल्म ‘छ माया छपक्कै’
हिट फिल्म दिन नसक्नु मेरो दुर्भाग्य : शुशिल श्रेष्ठ
इनास अवार्ड विपिन र स्वस्तिमाकै पोल्टामा
‘बादशाह जुट’ टिमले माग्यो मुस्लिम समुदायसँग माफी
रिलिज मितिमा भर, कन्टेन्टको छैन डर ?
हाउसफुल ४ नायिका कृतिलाई फोटोमा हेनुहोस् (फोटो फिचर)
“लभ यु हमेशा”को ट्रेलर सार्वजनिक (ट्रेलर)
अन्जलीको “खोली तर्दा” (गीत)
नायिका सोनम कपूरलाई फोटोमा हेर्नुहोस् (फोटो फिचर)
बिक्रम र सम्झनाको “ढाक्यो मायाले” (गीत)
मेलिनाको “तिमी बिना हाँसेर”मा अनु (गीत)
एकसाथ देखिँदै आमिर र सैफ
प्रमोदको “पहिले दिल” (गीत)